Dal Dadkiisu Aqoonsi U Baahan Yihiin, Hadana Aan Is Aqoonsanayn!! - khaliilberberawi's blog
Dal Dadkiisu Aqoonsi U Baahan Yihiin, Hadana Aan Is Aqoonsanayn!!
Waxaynu qormadan ku eegi doonaa Baadhitaan aanu ku samaynay arrin mushkilad weyn ku haysa wadankeena, taas oo la xidhiidha hab-nololeedka iyo hab-macaamilka bulshadeena. Waa arrin dibindaabyo iyo turaabturaba ku ah geedi-socodka wada-noolaanshaha qaybaha kala duwan ee bulshada. Waa arrin si xun u wiiqaysa hammiga, hiigasiga iyo horumarka wax-ku-oolk ah ee qof doonayo in in uu kaga midho-dhaliyo ujeedooyinka uu bar-tilmaameedsanayo.
Waxaa isweydiintu tahay, tolow waa maxay arrinkaasi, Sideebuu u shaqeeyaa, Maxaase qayb-ka-qaata shaqayntiisa ?
Si aad arrinkaa noola fahamtaan, isla markaana aad si buuxda ula-jaanqaadaan ujeedada dhabta ah ee laga leeyahay qormadan, waxaanu marka hore isku dayaynaa in aan sharaxaad kooban ka kixino waxa uu yahay “AQOONSIGU”. Aqoonsiga aanu ka hadlaynaana waa ka la xidhiidha hab-nololeedka iyo hab-macaamilka dadka.
1- Haddii aanu si guud u sheegno AQOONSIGU, waa dhambbaalo-maskaxeed xambaarsan qirasho, ogolaanshoa iyo aqbal ka imanaya qof ogol jiritaanka, horumarka iyo guulaha cidda sabo-wadaagta ama dan-wadaagta la ahi ku talaabsanayso.
2- Waa soo dhawaynta wax-qabadka wax tarka leh ee qof ku tallaansay.
3- Waa ku hambalyaynta qof kasbaday mansab ama gallad u gaar ah, oo uu dadaal dheer u soo maray halabsashadeeda.
4- Waa jawaab-maskaxeed ka dhasha dareennada is-caabiyaya, iska soo horjeeda, isla-jaanqaadaya, is-ogol, is-diidan, is-jecel, is-neceb, isla mar ahaantaana isku fikirka ah.
Marka aynu intaa kaga soo gudubno guud-markaas ku saabsan kelmada AQOONSI, waxa aynu si qumaati ah u guda-galaynaa ulajeedada dhabta ah ee ay salka ku hayso qormadani, taas oo ah in si toos ah farta loogu fiiqo nuxurka ay daaran tahay “Dad aqoonsi u baahan hadaba aan is aqoonsanayn.”
Waxaa marag madoon ah in inbadan oo bulshadeena ka mid ahi la nooshahay dabaceedo aan diinta iyo dadnimada toona ku fiicnayd, kuwaas oo ay ka mid yihiin; xaasidnimo, damaacinimo, inkiraad, quudhsi, boobid hanti cid kale, aflagaadayn, ceebayn, si-xun-u-naqdin, si-xun-u-la-dhaqmid iyo sharaf dilis. Waxaana waxyaabahani marka ay is biirsadaan sababaan cadaawad, xumaan, xidhiidhkii bulsho oo meesha ka baxa iyo kala fogaansho soo kala dhex-gala dadka sabo-wadaagta ah.
Waa muhiim in mar kasta lagu dadaalo sidii hab-dhanqannadaas loo suulin lahaa ama loo tir-tiri lahaa, isla mar ahaantaana meesha looga saari lahaa, si loo helo wada-noolaasho dhamaystiran oo ka dhex-dhasha dadka deegaan-wadaagta ah. Waa lagama maar-maan in dadku wanaaga iyo galladaaha uu ilaahay cid kasta gaarkiisa u siinayo la isu qiro, oo aan la isku xaasidin.
Waa biyo-kama-dhibcaan in qofku maanka iyo maskaxdaba ku hayo Xadiisyada nolosha iyo macaamilka bulshada saxaya ee laga soo weriyey nebigeena Muxamed [Naxariis iyo nabad-gelyo korkiisa ha ahaatee] ee ahaa “Midkiin-na imaan laga helimaayo ilaa waxa uu naftiisa la jecelyahay, la jeclaado walaalkii.”
Waxaa kaloo uu nebibigu marka kale yidhi “Ha is-xaasidina, ha is-u-cadhoonina, Ha is-u-debo-deedinina [yacnii haka tegina ee heshiiya]....” kolka aynu labadaas xadiis fiican u dhugano, waxaa inoo soo baxaya sida ay wax-ku-oolka u tahay wanaajinta, ilaalinta iyo horumarinta xidhiidhka as-aasiga ah ee ka dhexeeya bulshada.
Waxaa inoo caddaanaysa in qofka islaamka ah IIMAANKIISA-DIINEED uu ku xidhanyahay walaalkiisa kale ee Islaamka ah sida uu ka yeelo, oo haddii uu wanaajinaya in IMAANKIISU uu hagaagayo, haddii uu xumeeyana in IMAANKIISU xumaanayo.
Waxaan jeclahay in aynu imika si waafi ah isula fahamnay dulucda qormadan, oo xadiisyadaas aynu soo tibaaxnay waxa ay xusayaan sida ay muhiimka u tahay in qofku aqoonsado wanaagyadayada iyo Galladaha uu ilaahay siiyey qofka walaalkiisa ah.
Sidaa darteed, waxaynu ka wada dheregsan-nahay culayska iyo mashkilada ay inagu hayso aqoonsi la'aantu, maxaayeelay waxaa dhacan oo la dadafeeyey xuquuqdii aynu dad ahaaan iyo dal ahaan-ba lahayn. Waxaa la dafiray oo la iska indho-maray ka mid noqoshadeenii duwalka caalamka. Waxaa meel la iska dhigay dawladnimadeenii. Waxaa lugta la inoogu dal baaba'ay, oo kala daatay, oo gubanaya, oo dhiigu qulqulayo.
Dhibta uu aqoonsi la'aantaasi inagu hayo, waxaa ka sii xeel-dheer is aqoonsi la'aanta bulshada dhexdeeda. Haddii aan soo qaato dhawr tusaale oo si mug leh u cadaynaya arrintaasna;
1- Waa ta koobaade wax aynu nahay bulsho ay ku dhex-nooshahay qayb inaga mid ah oo aynu takoornay [waa beelaha la Hayb-sooco] wax allaale iyo wax lagu takoornayna aanay wax cad ahayn, waa dad islaam ah, oo Islaamnima inala wadaaga, waa dad aynu sabo-wadaag muddo dheer ahayn, waa dad lagu fogeeyey oo xuquuqdii sinnaanimo lagu duudsiyey dacaayado aad raqiis u ah, oo ay ka mid tahay “maalin bay leexdeen ama bakhtibay cuneen,” maaha wax loo cuskan karo in qof dhan oo islaam ah in lagu takooro.
Waxaana ficilkaasi keenay in la Aqoonsan-waayo xuquuqdii qofnimo iyo dadnimo ee dadkaasi bulshada ku dhex lahaayeen.
2- Waxa aynu nahay bulsho canaadnimada iyo madax-agaygu ku badan yihiin, oo metelan haddii maanta la yidhaahdo “hebel ayaa halkaas madax ka noqday,” waxaa markiiba soo baxay dareeno kala duwan oo ay ka mid yihiin, “Kee!! Ma hebel ayaad noo sheegaysaan, miyaanu ahayn kii aanu naqaanay, Ciddidaa in leeg ma soo kordhinayo,” waxaabaa laga yeebaa qofkaa uu sheegayo in looga sheekeeyey oo xittaa aanau arag.
Waxaa kalood maqli karaysaa “Waar nimayow kaas xun ee dawlada noogu jiraa ee halkaas madax ka ahi wax-ba nooguma filna, ee waanu bedelaynaa.” Hadda waxaa laga yaaba qofka la sheegayaa in uu yahay ka dawlada ugu wax-qabadka badan ee Qaranka daacada u ah. Waxaad mar kale maqli karaysaa “Annaga nama x
3- Waxaynu nahay bulsho jecel wada noolaanshaha, hasayeeshee aan jeclayn kala noolaansha, taas oo macnahuudu noqonayo, waxa aynu nahay dadka had iyo goor doorbida sinnaanta, isu-dhawaanshaha iyo wax-wada-qabka.
Halkaas waxaa kaaga muuqanaysa in marka isbedel iyo horumar uu ku takalaabsado qof bulshada ka mid ahi in uu yeelayo dad badan oo lidi ku ah tallaabadaas.
Kaba soo qaad qofkii waxa uu noqday masuul sare ama hantiile, cid kaleba iska daayo intii ay nolal-wadaagta iyo xidhiidhka tooska ah ay layeen, ayaa markiiba waxay u kala baxayaan dhawr qaybood, qolo waxa ay markiisaba isku dayaysaa in ay xidhiidhkoodii soo kordhistaan oo way aqoonsanayaan horumarkaas nuu sameeyey, qolo kalena.
Qolo kalena way naqdinayaan, oo waxay samaynayaan odoros nafadeed ku saabsan qofkaas, waxa ay bilaabayaan in ay ku tiraab, “Kee ma hebel, oo sownigii shalay naqaay sida uu ahaa, goormuu noosheeganayaa madaxnimada.........iskadaa waxba soo kordhinmaayee, waa la yaqaanaaye.”
Hadaladaas iyo kuwo kale oo la mid ah ayay ku maararoobayaan, oo waxaanay yeelanayn qiraal-kii aqoonsigan.
Qolada labada kasii darani waxa weeyaan, iyaga oo qofkaa hebel u garanayaa ayay hadana waxa ay ula badheedhayaan cadaawad-nololeed, waxa ay samaynayaan dacaayado iyo naqdis fara badan oo lagu durayo shaqsiyada iyo mansabka qofkaas, waana qolada ugu xun, ee ugu xaasidnimada xun.
Marka aynu qodobkan soo uruurinayo waxaa jirin qiraalkii aqooniga-qofnimo.
4- Waxa aynu nahay bulsho in-badan oo ka mid ahi ay ka maqantahay hab-dhaqanka iyo la fal-gelida bad-weynta Waddaniyada, oo ah furaha isfahamka dadka iyo la macaamilka ciidda. Waddaniyadu waa shayga suurta-geliya wada-noolaanshaha iyo
5- Waxa aynu nahay bulsho ay ku fogaatay casabiyada iyo caadifada ku dhisan qabyaalada oo ka soo dheegantay qabiilka, oo runtii ah wax aanay cidina difiri karin jiritaankiisa iyo ku dhaqankiisaba.
Waxaana qodobkani ka mid yahay arrimaha ugu xoogan ee gun-dhiga u ah is-aqoonsi la'aanta bulshada, waa arrinta ugu xasaasisan ee doc-wareenka ugu culus ku haysa wada-noolaansha qaybaha kala duwan ee bulshada waddanka.
Sidaaas marka ay tahay waxa meesha ka baxaya jewigii nololeed ee ku dhisnaa is-aqoonsiga, haddii ay sidaasi dhacdana waxa curyaamaya itijaahii suubanaa ee ku dhisnaa wada-noolaanshaha dadka.
Mar kasta oo ku dhaqanka hab-nololeedka qabyaaladu uu sii xoogaystaba, waxaa daciifa oo hoos-u-dhaca is-aqoonsiga ka dhexeeya dadka meel ku wada nool.
Sidaa darteed qabyaaladu waxa ay safka hore kaga jirtaa rukunnada xudunta u ah is-aqoonsi la'aanta dadka
Haddii aynu ka soo gudubno tibaaxyadaas guud ee aynu ku lafo-guraynay hummaaga iyo macnayawga kala gedisan ee aqoonsiga, waxa aynu hadda u imanaynaa inaynu si toos ah u dhex-muuqarano ka faaloodida noocyada is aqoonsi la'aantaada ee wadankeena ka jira, oo laga yaabo in in-badan oo idinka mid ahi aad dhaadan tihiin, hasayeeshee aydaan si qoto-dheer ugu fiirsan jiritaankooda.
Noocyada is-aqoonsi la'aanta ah ee wadankeena ka jira, ayaa isugu jira kuwo saamayn togan ku yeesha wada-noolaanshaha iyo hab-macaamilka dadka, halka qaar kalena ay leeyihiin saamayn taban oo u fiirsashadooda leh.
Waxaana noocyada is-aqoonsi la'aantu yihiin kuwo ka dhex aloosan guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada, metelan; waxaad marar badan arkaysaa iyadoo Aqoonyahanku aanu aqoonyahanka kale aqoonsanayn, Siyaasigu aanu siyaasiga kale ee la heerka ah aqoonsanayn, Abwaanku aanu Abwaan kale ee la xigmada ah aqoonsanayn, Saxafiga qoraaladiisa u bogaa aanu saxafiga kale ee aan ka dhicin aqoonsanayn, mararka qaar Sheekh baliiqa ahi aanu aqoonsanayn Sheekha kale ee aan wax ka dhicin, Dhakhtarku aanu isna mararka qaar aqoonsanayn dhakharka kale ee la mid ah, Fannaanku aanu isna aqoonsanayn fannaanka kale ee la faca ah.
Waxaa is-aqoonsi la'aan xoogan noocaas dadka isku xirfada ah, Shirkadaha isku waxa soo saara iyo kuwa isku adeega ah, goobaha ganacsiga ee isku nooca iibiya iyo weliba goobaha waxbarashada ee kala hororsiga ugu jira ardayda baadi-goobaysa waxbarasho tayo leh.
Isku soo wada xooriyoo, Intaas oo is-aqoonsi la'aaneed iyo kuwo kale oo badan ayaa waddankeena ka jira, kuwaas oo dabcan sida aynu soo tibaaxnay isugu jira qaar leh musawir togan oo saamayntooda leh iyo mid tabanba.
Guntii iyo gabagabadii, waaxnu qormadan ku soo af-meeraynaa taladan odhanaysa “Haddaanay bulshadu is-aqoonsan lama hellayo is-faham, is-dhexgal, is-kaashi, isu-imaatin iyo is-raaligelin-nololeed.
Lama helayo wax-wadda lahaansho [danguud[, isu-bogaadin iyo is-qirid.” Sidaas darteed ha la isu quudho in la is-aqoonsado.
By:- C/shakuur Xaaji Muxumed Muuse [C/heersare]
# Posted on Thursday, 07 January 2010 at 1:37 PM